डा. शेखर कोइराला का लेखहरु
डा. शेखर कोइराला, श्रावण ५, २०७३
विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरूले मुलुकलाई फेरि अस्थिरताको मार्गमा लैजाने हो कि भन्ने आशंकाका बादलहरू देखापरेको छ । मुलुक राज्यविहीन अवस्थामा पुगेको अनुभव भइरहेको छ ।
डा. शेखर कोइराला, जेष्ठ १४, २०७३
दिनानुदिन मुलुकको परिस्थिति जटिल बाटोतर्फ बढ्दैछ । हाम्रा अगाडि ठूला चुनौतीका पहाडहरू उभिएका छन् । ती चुनौतीहरूसँग सामना गर्ने हामीभित्रको क्षमता कमजोर हुँदै त गइरहेको छैन भन्ने आभास भैरहेछ । सरकारले अकर्मण्यता प्रस्तुत गर्न केही बाँकी राखेको छैन ।
न्यायिक निकायमा गलत नजिर
डा. शेखर कोइराला, चैत्र ९, २०७२
दुई वर्षदेखि रोकिएको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अहिले सुरु भएसँगै यसले तातो बहस पैदा गरेको छ । अपूर्ण रहेको न्यायपरिषदले एघारजना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुको पछाडिको नियत के हो भनेर विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।
गतिशील कांग्रेसको खोजी
डा. शेखर कोइराला, फाल्गुन १८, २०७२
राष्ट्रियता यतिबेला अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । अहिले जस्तो राष्ट्रियता कमजोर कहिल्यै भएको थिएन ।
लोकतन्त्रमा भागबन्डाको राजनीति
डा. शेखर कोइराला, कार्तिक ३, २०७२
संविधान निर्माण र नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनपछाडि मुलुक नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । १२ बुँदे सहमतिमार्फत अगाडि बढेको राजनीतिले करिब–करिब संविधान घोषणाको मितिसम्म एक प्रकारले सहमतिकै सिद्धान्त अवलम्बन गर्‍यो ।